Kusvira hure kusvika ratunda sevolcano! - Vanoda Zvinhu
Kusvira HURE kusvika RAKUCHEMERA MBORO – rakatunda kunge VOLCANO raputikira muBECHE RAKE!! Pane mahure anofarisa vanoda kuzviona kunge they have it all. One day ndakarongera HURE remuHolys rimwe rine rasta so. Ndakanyatsodya mushonga wangu hangu wandakapihwa nasekuru. Mushonga uyu wayiita kuti once mboro yangomira zvinotora more than 8 Hours kuti irare.
Ndakasvika ndikataura naye ndokunditi $15 short time ndikabvuma akanditora akaenda neni kuBack Room. Tichingopinda ndakamuudza ndikati nhasi ndoda kumusvira kusvika achema. Akavhaira akati ane makore achisvirwa and vashoma vakaita kuti atunde. Ndakamuvimbisa ndikati nhasi zvichachinja. Akaseka ndokukanda macondom paBed pake.
Ndakatora one ndokubva ndapfeka. Mboro yairwadza nekumira ndokubva ndati no wasting time. Ndakati ndoda kutanga nekumashure ndokubva akotama paBed akatsamhira pillow akandipa magaro ese kuti ave angu. Ndakapinza zimboro rangu mukati make ndikaona achivhunduka kuoma kwayanga yakaita.
Ndakamuzvambura nemboro kusvika ndakuyerera sweat. Akatarisa kumashure akati “ko hautunde here iwe?” Ndakaseka hangu ndikati “handisati ndatanga kusvira hanti short time inopera ndatunda?” Akati ehe ndikati nhasi wamama. Ndakamuti change position and ndokumurova nayo via missionary. Akatanga kutambisa beche achirova chikapa beche rake richiita kusveta mboro yangu and thanks to condom hapana kutunda kwakaitika. Ndakamusvira kusvika aneta and for the first time ndakaona achivhunduka pameso pake achiratidza kuva concerned.
Akaneta nacho chikapa after atunda heavy and achifemera pamusoro akada kutaura ini ndokuvhara muromo wake newangu. Ndakamukisser zvakasimba ndikaona iye akutobatirira. Ndakamira kumukisser ndokumutarisa ndakaona misodzi ichierera mumaziso ake ndikaziva kuti awacha. Ndakamurova nayo 2 or 3 minutes ndokubva ndamira. Ndakadzupura mboro apa yanga yakamira kuita upright chaiyo yakazara mvura dzemubeche rake. Ndakamutarisa ndikati “are you OK?” Achichema kudaro akagutsurira musoro.
Ndakadzoka zvakare after drinking half yeBeer rangu ranga rasara ndokumusumudza makumbo mudenga ari pamashoulders angu. Ndakapinza mboro iya zvakare and yakanyura very fast. Ndakatanga ndakasimba and ndokurova chinhu. Rasta Hure misodzi ichierera chete apa achidaidzira kuti “DON’T STOP!!” nevoice riripamusoro soro. And i didn’t stop. Ndakamusvira kusvika atunda futi and this time it was a strong one. Mubhedha wakashaker mwana wevanhu achitunda kunge VOLCANO chaiyo yaputika mukati meBECHE RAKE. Handina kumira ndayisvira chete. Akanditarisa misodzi mumaziso akati “please can i have a short break hayo?” Ndakaramba ndakasimba ndichisvira futi and arimukati mekutaura akatunda futi and ndakaona akutoita mhere yekubongomora.
Ndakadzupura mboro ndokurara paBed next to her hangu iye akasimuka ndokunanga mukaSmall Bathroom ndokuvhura shower. Akamira mumvura iyoyo yaitonhora akanyarara kuti ZII… Ndakaramba ndakatarisa hangu ndichisekerera ndichigaya kuti this was $15 well spent…..
Kuisa Mukadzi waBoss Nyoro In My Office
Kubatikidzwa Ndichisvirwa Nyoro nefriend yebrother yangu
Kukwirwa ne Roja repamba patinogara
Kusvira Mai Mutsa ku Belvedere pamba patairoja
Kusvira Chihera ndamunhonga mubhawa mukadzi arikumusha
Updated: October 20, 2020 — 6:57 pm
Tags: kusvira hure kusvika ratunda, kusvira mahure, kutundisa hure